यस्ता थिए रमेश प्रसाईं जब बिजय कुमारले पहिलोपटक भेटेका थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
यस्ता थिए रमेश प्रसाईं जब बिजय कुमारले पहिलोपटक भेटेका थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
March 18, 2021 AdminLeaveaComment on यस्ता थिए रमेश प्रसाईं जब बिजय कुमारले पहिलोपटक भेटेका थियो ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
दृष्टिबिहिन पढ्ने बिद्यालय गएको पहिलो अनुभव थियो बिजय कुमारलाई ,बिद्यालय थियो पुर्वाञ्चल ज्ञानचक्षु बिद्यालय,धरान ।
त्यश बिद्यालय भित्र बिद्यार्थीको क्रियाकलापबाट निकै नै मत्रमुग्द भए बिजय ।भकुण्डो अनि भकुण्डो बिहिर प्लास्टिक अनि त्यहि प्लास्टिकको आवाजले भकुणडोतिर दौडिदै गरेका बिद्यार्थीहरु देखेर झस्याङ्क समेत भएका थिए विजय ।
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि जे जति हुन्छ आफैमा सन्तुष्ट मानेर रमाउने कोसिस गरिरहेका थिए ।त्यतिकै एकजना बिद्यार्थीसग भेट भयो ती थिए । रमेश प्रसाईं जस्को अहिले नामले मात्रै पनि विश्व काप्ने गर्छ ।तिनै रमेशलाई पहिलोपटक देखेका विजय उनको शारिरक दुर्बलता देखेर झस्याङ्ग भए,नहुन पनि किन ।
विजय रमेशलाई हेर्दे गर्दा भावुक समेत भएका थिए ।रमेश त्यतिबेला पनि एक्दमै अब्बल छात्रमा गनिन्थे त्यति मात्रै हैन उनको रुचि साहित्यमा पनि एकदमै बढि थियो । बिजयसगको पहिलो भेटमा रमेशले आफैले रचेको कविता समेत सुनाए । त्यतिमात्रै हैन नेपाली साहित्यमा पिएचडि समेत गर्ने जिकिर गरेका थिए ।
थप हेर्नुहोस् भिडियोमा:
भोलीको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र ०६ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १९ तारिख
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र ०६ गते शुक्रबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मार्च १९ तारिख